Guddoomiye Tarsan Iyo Wasiir Durraan | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Guddoomiye Tarsan Iyo Wasiir Durraan
Guddoomiye Tarsan Iyo Wasiir Durraan
Sanadihii ugu horeeyay ee xukunkii Kacaankii Soomaaliyeed ayuu wuxuu shaqaalaha Soomaaliyeed u hibeeyay gurigiisii Madaxwayne Siyaad Allaha u naxariistee , gurigaas oo haattan loo yaqaano Shaqaalaha kuna yaalla Isgoyska Shaqaalaha waxaana haattan ku shaqeeya oo dagan Hay’adda Socdaalka Soomaaliyeed , waa halka laga dalbado Baasaaboorka Soomaaliyeed.
Duqii magaalada Muqdisho ee Maxamuud Tarsan ayaa waxaa u yeeray Madaxwayne Xassan Sheekh wuxuuna faray in guriga shaqaalaha uu ku qoro lahaashihiisa Marwada Madaxwaynaha ee xiligaas , Gudoomiye Tarsan wuxuu iisheegay inuu ku yiri Madaxwayne gurigaas aniga waa iga wayn yahay haddii aan shakhsi ku qorana waxaan noqonayaa tuke cambaar leh mustaqbalkana waxaa la ii aqoon san khaa’in , Gudoomiye Tarsan sababihii xilka uu ku waayay ayuu ka mid ahaa shakhsiyayna guriga shaqaalaha.
Nasiib dadro waxaa ganacsto ku wareejiyay gurigaas Wasiirkii hore ee shaqaalaha ahna haattan wasiirka duulista Durraan Faarax iyo Xildhibaan Cabdishakuur Gaala Eri oo dadka ugu sheekeeya inuu yahay gacan yaraha madaxwaynaha iyo taliyaha nabad sugidda. Guriga shaqaalaha ayaa la filayaa inay Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda dhawaan ka guurito loona raro dhisme cusub oo laga dhisay meel aan ka fogayn dhabaha diyaaradaha Xamar .
Mahadi ha ka gaadhee Wasiirka cusub ee shaqada iyo shaqaalaha Mudane Cabdi Wahaab Ugaas Khaliif ayaa heshiiskaas waxba kama jiraan ka dhigay laalayna wareegtadii uu Wasiir Durraan ugu wareejiyay Guriga shaqaalaha Ganacsatadaas ku dhiiratay inay hanti guud sifo aan sharci ahayn ku qaataan.
Waxaa lagu jiraa xiliga ay siyaasiinta aan damiirka lahayn iyo ganacsatada boobka hantida shacabka ku tanaaday ay boobka qaawan ku yeelan jireen hantida qaranka Soomaaliyeed . xubnaha haattan xarumaha dawladda jooga xoolo aad xaddeen xero idiin buuxin maayaan , filicka aad maanta samaysana qoraalada taariikhda ayaa qiri doona .
F Xiirane ( NSS 1976 – 1991 )
Previous articleNin loo haysto dil iyo dhaawac uu u geystey 16 bisadood
Next articleBaarlamanka Carabta oo soo dhaweeyay qabashada doorashada Soomaaliya